Tratran’ny zandary sy ny fokonolona… : nokaramaina 30 tapitrisa Ar ireo roa lahy mpangalatra lakolosy | NewsMada
Ny fiaraha-mientan’ny zandary sy ny fokonolona ao amin’ny kaominina Alarobia, distrikan’i Manjakandriana no nahatrarana ireto roa lahy mpangalatra lakolosim-piangonana tao an-toerana, ny alahady 14 aogositra 2016 teo. Volabe, satria 30 tapitrisa Ar be izao ny voalaza fa nanaramana azy ireo tamin’izao asa ratsy izao…
Tsy hoe mitaona sy/na mampirisika ny olona hangalatra fa tena volabe tokoa ny karaman’ireny jiolahy mpangalatra lakolosy ireny matoa mirisika sy manao sorona ny ainy ny sasany amin’izy ireo. Nandritra ny fetim-piangonana tao amin’ny Ekar Ankazomasina, fokontany Ankadimbazimba, kaominina ambanivohitra Alarobia, distrikan’i Manjakandriana no nangalaran’ny jiolahy roa ny lakolosim-piangonana. “Fiaraha-miasan’ny zandary avy ao amin’ny borigady sy ny poste Avancé nampian’ny fokonolona ny nahafahana nisambotra ireto jiolahy ireto, ny alahady tolakandro tamin’ny 3 ora. Mailo ny filoha lefitry ny fiangonana ka namindra avy hatrany ny lakolosim-piangonana any an-tranony. Tsikaritr’ireo jiolahy anefa ny toerana nisy ilay lakolosy ka novakin’izy ireo ny tranon’ity tompon’andraikitry ny fiangonana ity. Niverina tampoka anefa izy ka tratra teo am-pibatana lakolosy ry zalahy”, hoy ny kaomandin’ny borigadin’ny zandary ao Mantasoa ny CPHC Velson Tsirafy Françis. Olona eto an-dRenivohitra ny nolazain’ireo jiolahy fa nanarama azy hangalatra lakolosy. Mitentina 30 tapitrisa Ar ny karaman’izy roa lahy ka samy manana antsasany avy rehefa tonga soa aman-tsara any amin’ilay olona mampitady izany ilay lakolosy.
Lakolosy tena lafovidy…
Lasa nitsoaka ry zalahy raha vao nahita ilay vice-président-n’ny fiangonana Ekar Ankazomasina. Raikitra ny fifanenjehana ka latsaka tany anaty lavaka ny iray amin’ireo jiolahy. Naratra mafy teo amin’ny tongony ilay jiolahy nandritra ny fifanenjehana.
Voalazan’ny tompon’andraikitry ny fiangonana fa isan’ireo lakolosy tena lafo vidy io nalain’izy roa lahy ity. Avy aty an-drenivohitra ny iray amin’ireo jiolahy no nidina tany an-toerana nanao izany asa ratsy izany.
Efa fantatra izany fa eto an-dRenivohitra ny mpandray ireny lakolosy halatra ireny. Iza marina no tena mpanarama sy fototry ny atidohan’ny halatra lakolosim-piangonana? Izany rahateo koa no notakin’ny fiombonamben’ny Eveka taorian’ny fanambarana navoakan’izy ireo farany teo. Efa nanamafy izany koa ny FFKM, ny Pantekoty lasa teo. Tokony hifototra amin’izany, araka izany, ny fanadihadian’ny mpanao famotorana. Izany rahateo koa no andrasan’ny olona fa hatreto aloha, ireo mpikarama ihany no tratra. Midika izany fa mihodinkodina eto an-toerana ihany ity raharaha halatra lakolosim-piangonana ity satria tsy mbola nahenoana mihitsy hoe nisy lakolosy nivoaka teny amin’ny seranam-piaramanidina na teny amin’ny seranan-tsambo.